Albaabka Albaabka ee Deegaanka Qoyan
Sababta roobka dartiis, qoyaanka hawadu waxay noqon doontaa mid aad u kacsan, oo gees walba oo guriga ah wuxuu noqon karaa mid qoyan. Waqtigaan, waxay saameyn ku yeelan doontaa waqtiga isticmaalka qufulka albaabka. Sababta oo ah tayada qufulka qalabka ayaa fiican ama xun, mid ka mid ah shuruudaha waa waqtiga baaritaanka milixda lagu buufiyo. Sababta oo ah t ...
Sida loo nadiifiyo loona jeermis-dilo inta lagu jiro cudurka faafa
Cudurka faafa ee coronavirus-ka waa mid aad u xun. Sidaa darteed, ha ahaato guriga ama dibedda, si looga takhaluso faafitaanka fayraska, tani waa qiyaas muhiim ah. .Maxaan maanta idin bari doonaa sida loo nadiifiyo ...
Sida loo dayactiro albaabka albaabka
Albaabka albaabku waa shayga ugu badan ee nolol maalmeedkayaga. Dad badan ayaa moodaya hadii aad iibsato qufulka guriga, uma baahnid inaad dayactirtid ilaa uu ka jabo. Nolosha adeegga ee albaabka albaabku aad ayey u kordhaysaa iyadoo la fulinayo dhinacyo badan. 1.Lock jirka: Waa udub dhexaadka ...
Gacmaha Qalabka Qalabka, Albaabka Brass Door Knobs, Gacmaha Qalabka Iyo Qalabka, Albaabka Jaranjarada ee Ciriiriga leh, Doomaha Mashiinka Dabka ee Brass Lever, Doon adag oo albaabka adag leh,